Tacshiirado khasaara dhaliyay oo ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Carmo.
Monday November 18, 2019 - 19:10:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisada colaadeed ayaa wali kajira magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed Soomaaliyeed.
Ugu yaraan hal qof ayaa dhaawacmay tira kalane dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii iska rasaaseyn xooggan ay maanta barqadii ka dhacday afaafka hore ee xarunta Xisbiga Wadani.
Cabdi Raxmaan Cirro oo ah hoggaamiyaha mucaaradka maamulka 'Somaliland' ayaa sheegay in ciidamada Muuse Biixi ay isaga iyo mas'uuliyiinta Xisbiga Wadani ay rasaas ku fureen balse ay ka badbaadeen weerarkaas oo uu ku sheegay shirqool.
Inta badan waddooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa maanta ahaa kuwa xiran waxaana gaaf wareegayay ciidamo isugu jira boolis iyo melleteri, khilaafka u dhaxeeya siyaasiyiinta maamulka 'Somaliland' ayaa saameyn ka dhaliyay inta badan gobolka Maroodi Jeex.
Dhinaca kale is rasaasayn xooggan ayaa maanta ka dhacday deegaanka Carmo oo katirsan gobolka Bari, maleeshiyaad hubeysan ayaa rasaaseeyay gaari uu la socday Cabdi Samad Gallan oo ah wasiirka ammaanka maamulka Puntland.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ay ka dhasheen israsaaseynta deegaanka Carmo ku dhaxmartay ciidamada wasiir Gallan iyo ciidamada Daraawiishta oo mushaar la'aan ka gadoodsanaa.